Steel Couplers | SKM Steel Holdings Co., Ltd (Myanmar)
+959 977 990 777
SKM Steel Holdings Company Limited
HOME / STEEL COUPLERS
Steel Couplers with BARTEC Technology
SKM provides Steel Couplers for our processed rebars. Couplers are used to connect two bars in place of traditional lapping and provide the advantages of :
Reduced Wastage (No Need to Overlap Rebar)
Improved Building Quality (No ‘Gaps’ After Concrete Pouring)
Bartec® isafull performance (tension / compression / cyclic / fatigue) rebar splicing system designed for the connection of concrete reinforcing bars from Ø12 to 50mm (ASTM #4 to #18).
Bartec an ACI 318 Type2splice recommended for splicing applications including those inaseismic environment.
BARTEC® system is designed to withstand an ultimate tensile performance up to 800 MPa, thus resulting in Bar Break performance on most of the rebar available on the market.
For more information, please book an appointment with our Business Manager at 09 977 990 777 or sales@skmsteel.com
SKM Steel Holdings စက်ရုံတွင် Cut & Bend, Threading Service ပြုလုပ်ပါကBARTEC technology အသုံးပြုသော rebar coupler ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသော coupler များမှာ steel coupler များဖြစ်ပြီး BARTEC technology ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် 800 MPa အထိကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Bartec® ဟာ Ø12 mm မှ Ø50 mm အထိ သံချောင်းတွေဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ full performance rebar splicing system ဖြစ်ပါတယ်။ Full performance rebar splicing system ဆိုသည်မှာ Tension/ Compression/ Cyclic/ Fatigue လို့ခေါ်တဲ့ force and effect တွေကိုဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ performance system ဖြစ်ပါတယ်။
Bartec an ACI 318 Type2coupler ကို ငလျင်ဒဏ်ကိုခံရလေ့ရှိတဲ့ဒေသ (Seismic environment) တွေမှာ တည်ဆောက်တဲ့ အဆောက်အုံတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ splicing application တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ ပညာရှင်များကအကြံပြုပါတယ်။
BARTEC® ဟာ 800 MPa အထိကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်တဲ့ Rebar သံချောင်းအမျိုးအစားအတော်များများနှင့်အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။
SKM Steel Holdings တွင် Rebar ကို coupler အသုံးပြုပြီး လိုအပ်သော diameter အတိုင်းအတာများအတိုင်း ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Rebar သံချောင်း နှစ်ချောင်းဆက်သည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် formula အတိုင်း ဆက်သွယ်ရသည့်အတွက်ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ပိုခြင်း ၊အချိန်နှင့် လူအင်အားပိုမိုသုံးစွဲရခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါသည်။ Rebar Coupler များ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အချိန်နှင့် လူအင်အား သက်သာစေသည့် အပြင် Traditional Lapping မလိုအပ်သည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ပါသက်သာစေပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်သော Coupler အချက်အလက်များကို အပြည့်အစုံရှင်းပြပေးနိုင်ရန် မန်နေဂျာ (09 977 990 777) သို့ဖုန်းဆက်၍လည်းကောင်း၊ e-mail(sales@skmsteel.com) ပို့ပြီးလည်းကောင်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Picture Source: Dexta Group
No.37/B/39, 1st floor, Anawyahtar Road & 56th Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.
No.58, Corner of Kanaung Minthargyi Road & Makhayar Minthargyi Road, Thilawa local Industrial Zone, Kyauk Tan Township, Yangon, Myanmar.
© 2020 SKM Steel Holdings Co., Ltd.